Momba anay - JUMP MACHINERY (SHANGHAI) voafetra
JUMP MACHINERY (SHANGHAI) voafetra
JUMP MACHINERY (SHANGHAI) voafetra dia orinasa iraisan'ny teknolojia avo lenta, ny teo aloha dia ny orinasa mpamokatra masinina ao Shanghai, izay manampahaizana manokana amin'ny tsipika fanodinana lakilen'ny ranom-boankazo mifangaro, ny jam, ny pulp, ny fanodinana voankazo tropikaly, ny famenoana mafana zava-pisotro misy ranom-boankazo, zava-pisotro ahitra na dite, zava-pisotro misy karbona, yaorta, fromazy sy zavamaniry fanodinana ronono ronono. Ny mpiasanay dia manana toetra tsara faran'izay tsara, ary ny injeniera matihanina, ny teknisianina ary ny mpiasa R&D dia avy amin'ny ozinina mpanamboatra sakafo tany am-boalohany, manana tompony sy Ph. D amin'ny injenieran'ny sakafo sy milina famonosana, koa izahay dia feno fitaovana miaraka amin'ny fahaiza-manao feno amin'ny famolavolana sy ny fampandrosoana ny tetikasa iray manontolo, famokarana, fametrahana Komisiona, fiofanana ara-teknika, serivisy aorian'ny varotra ary lafiny hafa.
Ny orinasanay dia ny talen'ny fikambanan'ny indostrian'ny indostrian'ny sakafo sy ny fonosana any Chine, ary ny paty voatabia, masinina famenoana aseptika dia nandresy ireo vokatra marika marika kalitao voankazo sy legioma (NO: CFPMA-2017-050201) tamin'ny taona 2017, miaraka amina karazana fikarohana tsy miankina maro sy fampandrosoana ny vokatra vaovao sy ny National Patent. Nahazo tombony ny orinasanay eo amin'ny sehatry ny fanasana voankazo sy legioma, fanorotoroana, fitrandrahana pulp na ranom-boankazo, fizotran'ny hatsiaka, fifantohana mahomby kokoa, fanamafisana ny fantsona ary kitapo aseptika amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa ara-teknika feno amin'ny orinasa mpiara-miasa Italiana. . Azontsika atao ny manome ny tsipika famokarana iray manontolo miaraka amin'ny fahafahan'ny voankazo 20-1500 taonina isan'andro raha ny fangatahan'ny mpanjifa. Ny fizotry ny famokarana fitaovana dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra ISO9001, ny fizotran'ny dingana feno dia mifanaraka amin'ny fampiharana fenitra 5S. Ny orinasanay dia manaraka ny kalitao sy ny serivisy hananganana marika, taorian'ny ezaka efa an-taonany maro, ny orinasanay dia nanangana sary tsara miaraka amin'ny serivisy avo lenta mahomby, serivisy aorinan'ny varotra, mandritra izany fotoana izany, ny vokatray dia tafiditra ihany koa any Azia atsimo atsinanana, ny Moyen Orient, Azia afovoany, Rosia, Afrika, Amerika atsimo, Eropa ary tsena ampitan-dranomasina hafa.
Miantehitra amin'ny orinasa mpamokatra masinina sakafo maivana any Shanghai miaraka amin'ny traikefa manankarena sy tanjaka ara-teknika maherin'ny 40 taona momba ny masinina, mifikitra amin'ny foto-kevitra "Fandraisana an-tanana vahiny sy fanavaozana tsy miankina anatiny", nanangana voankazo famolavolana voankazo mihoatra ny 160 izahay. Mifototra amin'ny fitaovana saosy voatabia sy tsiranoka famokarana ranom-paoma, ny orinasanay dia nanambatra hatrany ny haitao farany an'ny firenena vahiny, nahatsapa tanteraka ny fampiroboroboana ny haitao, ary nanolo-tena hanome ny mpanjifa vahaolana matihanina indrindra, siantifika, ara-toekarena ary mitombina. Ny orinasanay dia tsy mitazona ny fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ny andrim-pikarohana toy ny National Fruit Institute of China Agricultural Science, the Central China Agricultural University, ary Jiangnan University, fa koa nanorina fiaraha-miasa ara-teknika marimaritra iraisana sy fiaraha-miasa amin'ny Italiana FBR, ROSSI sns .
Ny "fanavaozana ny milina famokarana manan-tsaina mba hahasoa ny fampandrosoana ara-pahasalamana an'ny olombelona" no tanjontsika. JUMP MACHINERY (SHANGHAI) LIMITED dia vonona hamorona milina sakafo sinoa mamiratra miaraka aminao!